Global Voices teny Malagasy » Taorian’ny fihetsiketsehana roa herinandro maninjitra, manery ny governora hiala ny Pôrtô Rikana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Aogositra 2019 4:49 GMT 1	 · Mpanoratra Ángel Carrión Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Amerika Latina, Karaiba, Pôrtô Rikô (Etazonia), Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana, Vaovao Tsara
Mpanao fihetsiketsehana mifaly ao anaty orana tamin'ny 22 Jolay tany San Juan, Porto Riko. Sary nivezivezy be tao amin'ny media sosialy ary nalaina tao amin'ny kaonty Twitter an'ilay mpiasa ara-tsosialy Larry Emil Alicea-Rodríguez (@larryemil ).
Nametra-pialàna  ny governoran'i Porto Riko, Ricardo Rosselló taorian'ny tapa-bolana nisian'ny hetsi-panoherana faobe sy fitroarana sivily ahitana ny sokajin'olona rehetra. Noho ny tsy fisian'ny sekreteram-panjakana, dia ny sekreteran'ny fitsarana Wanda Vázquez no ho lasa governora. Manankery manomboka amin'ny 5 ora maraina amin'ny 2 Aogositra ny fialàn'i Rossello.
Nahitana hetsi-panoherana isan'andro tao amin'ny tranoben'ny governora nandritra ny 14 andro maninjitra. Niparitaka vetivety tany amin'ireo kaominina maro hafa ao Porto Riko avy eo ny fihetsiketsehana. Natao tamin'ny 22 Jolay ny fihetsiketsehana goavana indrindra, tombanana  ho nahasarika olona 600.000 ohatra ny tao San Juan irery.
#FunFact  Zava-misy mahafinaritra tamin'ity diabe ity tao#PuertoRico . Tsy nisy fikambanana nikarakara izany. Nitranga tao amin'ny media sosialy izany, nalamin'ireo #PuertoRicans  te-hanohitra an'i #Rosselló , mitaky ny fialany. #ParoNacional  #News  #ParoNacionalPR  #RickyRenuncia  🎥:@NoticentroWAPA 
Saingy tsy voafetra ho an'i Porto Riko ihany ny hetsika. Fihetsiketsehana maro no natao tany amin'ireo firenena  izay ahitana Porto Rikàna, ao anatin'izany i Espaina, Arzantina, Slovenia, Frantsa, Hôlandy ary Etazonia.
👇🏽RESAKA: Ny fomba orizinaly rehetra izay nolazain'ny Porto Rikàna #RickyRenuncia 
Saingy andro maromaro talohan'ny nielezan'ny vaovao fametraham-pialàn'i Rosselló, nampahatsiahy  ireo mpamaky i Xiomara Torres Rivera, mpamakafaka manoratra ao amin'ny tetikasa fanaovan-gazety Todas, fa hanomboka ny tena asa rehefa miala amin'ny biraony ny governora:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/08/29/142200/
 Nirongatra : https://globalvoices.org/2019/07/14/puerto-ricans-demand-governor-rossello-resign-amid-corruption-and-telegramgate-scandals/